Voalohany any Jamaika: nahatratra 100% ny vaksiny i Jakes Hotel
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Voalohany any Jamaika: nahatratra 100% ny vaksiny i Jakes Hotel
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Jakes Hotel any Jamaika
Ny Minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon Edmund Bartlett dia nidera ny toeram-pialan-tsasatra malaza any South Coast, Jakes Hotel sy Jack Sprat, tamin'ny nahatratrarany mpiasa 100 isan-jato nandray ny fatra roa tamin'ny vaksinin'ny COVID-19.
Jakes Hotel no orinasa voalohany sy tokana ao Jamaika hatreto izay nahavita izany teo ambanin'ny hetsika vaksinin'ny fizahan-tany.
Mihombo ny fizahan-tany manerantany ary ny mpitsangatsangana dia mitady toerana azo antoka COVID amin'ny traikefa niainany.
Ny orinasa hafa any amin'ny morontsiraka atsimo mandray anjara amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny vaksiny dia voalaza fa eo anelanelan'ny 40 sy 70 isan-jato.
Izy ireo no orinasa voalohany sy tokana ao Jamaika hatreto izay nahavita izany teo ambanin'ny fandraisana andraikitry ny vaksinin'ny fizahan-tany nataon'ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny Fikambanan'ny Hotel sy ny mpizahatany ao Jamaika izay miara-miasa amin'ny Initiative Vaksinin'ny Sektoram-bahiny.
Nandritra ny fiarahabana an'i Jakes sy ireo mpiasa ao aminy dia nilaza ny minisitra Bartlett hoe: “Midera an'i Jakes aho tamin'ny fametraham-pialana haingana ny fanaovana vaksiny ireo mpiasa fizahan-tany rehetra. Ny indostrian'ny fizahan-tany dia eo amin'ny fiakarana eran'izao tontolo izao ary ny mpitsangatsangana dia mitady toerana azo antoka COVID amin'ny traikefa niainany. Raha te-hahazo tombony be indrindra isika dia tokony hampiseho ny fahavononany hiaro tena, ny mpiara-miasa aminy, ny fianakaviany ary ny mpitsidika antsika ny mpiasa fizahan-tany amin'ny alàlan'ny fanaovana vaksininy mpamonjy aina. "
Ny orinasa hafa any amin'ny morontsiraka atsimo mandray anjara amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny vaksiny dia voalaza fa eo anelanelan'ny 40 sy 70 isan-jato, ary ny ankamaroany dia vaksinin'ny doka roa voalohany.
Tamin'ny fanasongadinana ny zava-bita “Fianakaviana Jakes”, Jason Henzell, filohan'ny Jakes Hotel, Villas & Spa dia nilaza hoe: Jakes dia miezaka ny ho mpitantana tsara ny fizahan-tany amin'ny vondrom-piarahamonina, satria fantany fa ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpiasa sy ny vahininay, ary koa ny vondrom-piarahamonina midadasika ao amin'ny Treasure Beach, ary raha ny marina dia i Jamaika sy izao tontolo izao manontolo, dia manan-danja lehibe ho antsika ho toeram-pialan-tsasatra. ”
Raha nitantara ny fomba nanatanterahana izany dia nilaza Andriamatoa Henzell fa amin'ny fanaovana "izay rehetra ilaina sy fihaonana amin'izy ireo na aiza na aiza" dia mahazo aina izy ireo. “Nandany fotoana be tamin'ny mpiasa izahay momba ny fanabeazana azy ireo ny tantaran'ny vaksiny ao Jamaika ary ny fahombiazan'ny vaksinin'ny COVID-19 tsirairay. Nasainay nihaona tamin'ny dokotera izy ireo, nanendry fotoana ho azy ireo, nandamina fitaterana ary naka azy ireo tany an-tranony mihitsy aza, ny sasany tamin'izy ireo tao anaty fiarako ihany, ”hoy izy nanambara.
Andriamatoa Henzell koa dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fangorahana, satria ny olona menatra dia manosika azy ireo hiala fotsiny. Faly izy fa nandaitra ny fomba fanarahana fiheverana sy fahatakarana ary nanampy hoe:
Mikasika ny hetsika nasionaly hanaovana vaksiny ny mpiasan'ny fizahan-tany dia nilaza Andriamatoa Henzell hoe: "Betsaka ny voka-dratsy atokisana, tsy manosika azy ireo handalo izany ary manome azy ireo antony tokony hatahorana." Nanampy izy hoe: "Raha hanaraka ny fikarohana rehetra sy ny antontan'isa rehetra efa navoaka izahay, ny fanaovana vaksiny dia manome taham-pahombiazana lehibe kokoa ho anao amin'ny fandehanana mandritra ny andro mahatsiravina COVID raha tratry ny aretina ianao, noho izany dia manolotra hevitra mafy ianao ny vaksininy ary miresaka amin'ny dokoteranao momba izay mety mety aminao indrindra. ”